» मुटुदेखि मुटुसम्म भाग ४ – नयाँ वर्ष ‘जीन्दगीको अन्त्यको यात्रा’
१ बैशाख २०७६, आईतवार १९:२७
चन्द्र घलान/ हेटौडा,१ बैशाख । चारैतिर नयाँ वर्षको माहोल छ, नयाँ वर्षको शुभकामनाले फोनको म्यासेज बक्स र फेसबुकदेखि भाईबरसम्मका इनबक्सहरु भरिभराउ छन् अनि भरिभराउ छन् पर्यटकीय क्षेत्रहरु । नयाँ वर्षको नयाँ रुप अहिले झाँगिएको छ । नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा मनाईने न्यू इयर ईभलाई अल्कोहल र बियरले कब्जा जमाएको छ अनि नयाँ वर्षमा घुम्न नजानेलाई एलियनकै जस्तो व्यवहार समेत गरिन्छ । नयाँ वर्ष मनाईरहँदा हरेक वर्ष मेरो मनले भन्छ–‘हामी नयाँ वर्षको उत्सव किन मनाउँछौँ ?’ नयाँ वर्ष आउँदा किन हामी खुशी हुन्छौँ ? किन कि हरेक नयाँ वर्षले हामीलाई एक वर्ष बुढो बनाउँछ, अर्थात हामी हरेक वर्ष मृत्यूको नजिक एक कदम अगाडि बढ्छौँ । यसले हाम्रो आफन्त, हाम्रो प्रेम र हाम्रो आफ्ना मान्छेहरुलाई मृत्यूको झनझन नजिक पुराउँछ । हामी एक वर्ष मृत्यूको नजिक पुग्दा कसरी खुशी हुन सक्छौँ ? हेरौँ मुटुदेखि मुटुसम्म वेब सिरिजको चौथो भाग–
जीन्दगीमा एकदिन मरेरै जानुछ, एकदिन झरेरै जानुछ, आफन्त सबैलाई रुवाएरै जानुछ अनि हरेक आफन्तको मृत्यूमा रुनुछ । धेरै साथीहरुको भनाई हुन्छ– जीन्दगीका सबै पिडाहरुलाई बिर्सेर एकपटक हाँस्ने दिन हो नयाँ वर्ष त्यसैले जीन्दगीमा रमाईलो गर्नुपर्छ ।’ तर हरेक नयाँ वर्षले हाम्रो जिन्दगीलाई बुझ्ने एक दिनलाई अन्त्य गर्छ अनि हरेक वर्ष हामी मृत्यूको नजिक हुँदैजान्छौँ । त्यसैले नयाँ वर्षलाई हर्षका साथ मनाउनुपूर्व आफैलाई प्रश्न गरौँ हामी मृत्यूको खोजीमा छौँ कि जीवनको खोजीमा ? हामी दुःखको खोजीमा छौँ कि सुखको ? हामी को हौँ ? हामी किन बाँच्छौँ ? हामी किन मर्छौँ ? दुःख र पिडाले भरिएको यो संसारमा खुशी कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ ? यी प्रश्नहरु सुन्दा हामीलाई यो गम्भिर प्रश्न हो जस्तो लाग्छ । साँच्चै नि यी प्रश्नहरु जीन्दगीमा वास्तविक सुख खोज्नेहरुका लागि वास्तविक रुपमै गम्भिर छ । तर जे सुकै होस् जिन्दगीमा मोज गरिन्छ, रमाईलो गरिन्छ भन्नेहरुका लागि यो प्रश्न केबल हाँसोको माध्यम बन्न सक्छ ।
जीन्दगी एउटा अनमोल उपहारको रुपमा बुझ्छु । मेरो चाहाना छ कि मेरो माया गर्ने मान्छेसँग म सदैव बाँच्न सकुँ, सदैव खुशीसाथ आफ्नो परिवारसँग बाँच्न सकुँ । मैले मेरो आफन्त गुमाउनु नपरोस् । कसैको भयानक मृत्यू देख्न नपरोस् तर यो चाहाना सुन्दा मात्र पनि तपाईलाई बकम्फुसे लाग्न सक्छ किन कि यो सम्भव छैन भन्ने अहिलेसम्म हामीले बुझेका छौँ । तर जसले हाम्रो लागि जीन्दगी दियो उसैले कसरी मृत्यू दिन सक्छ । हामी पृथ्वीमा जन्मनुको प्रमुख उदेश्य के हो ? हामी साँच्चै राम्रो मान्छे बन्न चाहान्छौँ तर किन सँधैँ नराम्रो हुन्छौँ ? यस्ता प्रश्नहरु आजको दिनमा हामी गर्न सक्दैनौँ । किन कि हामी मध्ये धेरैको संख्यामा भौतिकवादी नै छौँ । भौतिकवादी सोचमै रहेर हामी जिन्दगीको रहस्य बुझ्न सक्दैनौँ । त्यसैले जिन्दगी बुझेकाहरुले नयाँ वर्षलाई केबल क्यालेण्डर फेर्ने दिनका रुपमा बुझ्नु जरुरी छ । हामी हरेक नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै यस्तै सोच्छौँ कि जिन्दगीको यो यात्रामा कहिले पिडा नभईदिए कस्तो हुन्थ्यो होला ? हाम्रो परिवार र हाम्रो आफन्तबाट कहिले पनि टाढा हुन नपरोस् । सदैव हाम्रो जीवनसाथीसँग प्रेम र विश्वासले बाँच्न सकियोस् । जिन्दगीका हरेक दिन नयाँ बनोस्, हरेक दिन प्रेममय बनोस् अनि हरेक दिन मनका हरेक आभाषहरु हाम्रो आफ्नो मान्छेको मुटुसम्म पुराउन सकियोस् । मुटुदेखि मुटुसम्म ।